करी पातहरू curry leaves बाट लाभ लिन सकिन्छ – Sajha Pati
करीपात भन्ने वितिकै के वा करीपात भनेको के हो भनेर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । करीपात भनेको एकप्रकारको झारको नाम हो जसका पातहरु खनाको स्वाद बढाउन गर्ने मा प्रयोग गरिन्छ । यो प्रायः दक्षिणी भारतमा प्रयोग गरिएको थियो तर आजभोली यो प्रत्येक भान्छामा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा धेरै कम प्रयोग गरिने करी पातहरूको चमत्कारिक फाइदाहरूको बारेमा बताउनेछौं । मान्यतया, हामी यस पातलाई हरेक भान्सामा विशेष स्वादका रूपमा लिन्छौं, तर स्वाद बाहेक, करी पातका केही अन्य फाइदाहरू पनि छन् ।
यसमा भिटामिन सी, भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, क्याल्सियम, फस्फोरस, फलाम, कडा पातहरूको साथ यसको प्रयोगले तपाईंको मुटुलाई सुधार गर्दछ, शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ साथै कपाल र छालाको रोगहरू टाढा राख्न गर्दछ ।
करी पातमा धेरै औषधीय गुणहरू छन्, जुन स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छन् । यसलाई मिठो नीम पनि भनिन्छ । मीठो नीम खानाको स्वाद बढाउन प्रयोग गरिन्छ । करी पातले हाम्रो खानाको स्वाद मात्र बढाउँदैन, यसले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै रोगहरूबाट टाढा राख्न मद्दत गर्दछ । मीठो नीममा फलाम, क्याल्सियम, फास्फोरस र भिटामिनहरूका धेरै प्रकार हुन्छन् जसले शरीरलाई एनीमिया, उच्च बीपी, मधुमेह जस्ता रोगबाट बचाउन मद्दत गर्दछ. यस बाहेक, करी पातमा भिटामिन बी २, बी ६ र बी ९ भरपुरमात्रामा हुन्छ, जसले हाम्रो कपाल गाढा, बाक्लो र बलियो बनाउँछ ।
कलेजोको क्षति रोक्छ : यदि तपाई धेरै रक्सी पिउनुहुन्छ र यसले कलेजोलाई हानी पु¥याइरहेको छ भने, करीका पातहरू आफ्नो भोजनमा समावेश गर्न नबिर्सनुहोस् । एशियन जर्नल अफ फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्चका अनुसार, आक्सिडेटिभ तनाव र विषाक्त पदार्थहरू जुन शरीरमा (पबझउाभचय)ि काम्फेरोलको कारणले बनेको हुन्छ जसले कलेजो बिगार्न सक्छ । यदि तपाईं कडा पातहरू खानुहुन्छ भने, तब यसमा भिटामिन ए र सीले कलेजोलाई राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्दछ ।
कपालका लागि : कडा पातहरू कपालका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छन्. कडा पातहरू पनि हाम्रो कपालको जरालाई बलियो बनाउन, गाढा अँध्यारो पार्न, कपाल झर्ना रोक्न र कपाललाई डन्ड्रफबाट जोगाउन प्रयोग गर्दछन् । करी पातबाट कपाल टोनिक बनाउनका लागि करी पातहरू उमाल्नुहोस् ता कि ती पानीमा विलीन हुन्छन् र पानीको रंग हरियो हुन्छ । यो टानिक १!५÷२० मिनेटको लागि तपाईको टाउकोमा लगाउनुहोस् । हप्तामा २ पटक कपालको मसाज गर्दा धेरै कपाल हुन्छ । साथै, आधा कप करी दाना दाना संग पीस्नुहोस् र त्यो मिश्रण आफ्नो कपालमा लगाउनुहोस, र केही मिनेट पछि धुनुहोस् ।
वजन घटाउन : माथि तपाईले करी पातका धेरै स्वास्थ्य लाभहरूको बारेमा जान्नु भयो तर तपाईंलाई यो जाने चकित हुनेछ कि यो हाम्रो वजनलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ । करी पातमा रहेको फाइबरको मात्राले हाम्रो शरीरमा भण्डार गरिएको थप फ्याट र विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ । हरेक दिन करी पात खानेले तौल घटाउँछ र कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ । तसर्थ, अर्को पटक तपाईं थालमा करी पातहरू नछोड्नुहोस् र यसलाई चबाउनु’होस् र सजिलैसँग खानुहोस् ।
मुटु रोगबाट बचाउँछः रगतबाट नराम्रो कोलेस्ट्रोल कम गर्न यसले महत्त्वप“र्ण भ“मिका खेल्दछ भनेर तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । यसले रगतमा राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाएर हृदय रोग र एथेरोस्क्लेरोसिस बिरूद्ध रक्षा गर्दछ । कडा पातहरूमा हाम्रो शरीरमा रगत कोलेस्ट्राल कम गर्ने गुण हुन्छ । जुन हामी हृदय रोगह? बाट टाढा रहन सक्छौं । हुनसक्छ तपाईलाई थाहा छ शरीरमा अक्सिडेटिभ कोलेस्ट्रोलले खराब कोलेस्ट्रोल बनाउन सहयोग गर्दछ । जसले हृदयघातको जोखिम बढाउँदछ । कडा पातहरूमा एन्टीआक्सीडन्ट गुणहरू हुन्छन् जसले कोलेस्ट्रोलको अक्सिडेशन रोक्दछन् जसले गर्दा शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दैन । यस तरिकाले यसले हामीलाई मुटुसँग सम्बन्धित समस्याहरूबाट टाढा रहन मद्दत गर्दछ ।
एनीमियाबाट बचाउँछः : एनीमिया शरीरमा एनीमियाको कारणले मात्र होईन । ब?, जब शरीरको शक्तिले फलामलाई अवशोषित गर्दछ र यसलाई राम्रोसँग कम गर्दछ, तब एनीमियाको जोखिम बढ्छ । करी पातहरू यस रोगबाट राहत पाउनका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ, यो फलाम र फोलिक एसिडको उच्च मात्रामा पाइन्छ. हाम्रो शरीरमा फोलिक एसिडले फलाम र फलामलाई अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसोभए यदि तपाईं रक्ताल्पताबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, खाली पेटमा दैनिक एक तिथि र अगच करी पातहरू चबाउनुहोस्. यसले शरीरको फलामको स्तर बढाउँछ र रक्ताल्पताको जोखिम कम गर्दछ ।
रगतमा चिनीको स्तर नियन्त्रण गर्दछ : कडा पातहरूको फाइबरले रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्दछ रगतमा इन्स’लिनलाई असर गरेर । कडा पातहरूले वजनलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ हजमेको शक्ति बढाउँदै । त्यसकारण, मध’मेह भएको र वजन बढाउने व्यक्तिहरूले कडा पातहरू खान आवश्यक छ । करी पातमा एंटीडायबेटिक एजेन्टहरू हुन्छन् जसले शरीरमा ईन्सुलिन गतिविधिलाई प्रभावित गरेर रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्दछ । यस बाहेक, करी पातमा फाइबरको मात्रा चिनीबाट पीडित बिरामीहरूका लागि पनि लाभदायक हुन्छ । त्यसैले हरेक बिहान खाली पेटमा कडा पातहरूको सेवन शुरू गर्नुहोस् र मधुमेहबाट छुटकारा पाउनुहोस् ।
हाजमाको शक्ति बढाउँछ : कडा पातले एसिडिटी वा अपच रोक्छ र पेटलाई शान्त राख्न मद्दत गर्दछ ।
पखाला को लक्षणबाट राहत दिन्छ : करीपातमा पाइने हल्का रेचकले पखालाबाट राहत पाउन सहयोग गर्दछ । यसको एन्टिब्याक्टेरिया र एन्टीइन्फ्लेमेटरी गुणहरूको कारण, यसले पेटलाई छिटो शान्त गराउने कार्य गर्दछ. कडा पातले शरीरको तीन डोशालाई सन्तुलनमा राख्छ र पेटमा पित्ताशयलाई कम गर्दछ ।
छाती र नाकको समस्याबाट छुटकारा : यदि तपाईं खोकी, साइनस वा बलगमको कारण चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि करीपातलोपना तपाईंको डाईटमा समावेश गर्नुहोस् र यस समस्याबाट मुक्त हुनुहोस् । करी पातमा भिटामिन सी, एन्टीइन्फ्लेमेन्टरी र एन्टीआक्सीडन्ट गुणहरूले बलगम फ्रिज हुन दिदैन ।